Toriteny mana anio - Mana isan andro
ALAKAMISY 20 FEBROARY
JAONA 10.22-30 F. 1
Ny fetin’ny fahazavana (22). Ankalazain’ny Jiosy mandrak’androany rehefa volana desambra ny fetin’ny Fitokanana na fahazavana izay handrehetana jiro isan-trano mandritra ny valo andro. Fahatsiarovana ny nanadiovan’i Jodasy Makkabeo ny tempoly tamin’ny taona 165 talohan’i Kristy izay novetavetain’i Antiochus Epiphane.
Ny fanontanian’ny tsy mino (24). Tsy ny hahalalana an’i Kristy bebe kokoa akory ka hahatonga azy ireo ho mpianatra fa mba hamandriana an’i Jesoa hahazoana misambotra Azy. Rehefa tsy ondrin’ny Tompo tokoa, satria tsy mety mino Azy, na dia mandre toriteny sy Tenin’Andriamanitra impiry aza dia tsy hety handray mihitsy. Tsy kisendrasendra ny hahitanao ity Mana anio ity fa fitaomana anao hino izany anio, mba ho isan’ny ondrin’ny Tompo ianao.
Aza ho isan’izay tsy mino fa minoa ! (20.27)
Ny ondrin’ny Tompo (27-30). Ankoatran’ny fihainoana ny Tompo sy ny fanarahana Azy dia tsy misy zavatra betsaka takiana amin’izy ireo eto fa dia ny ataon’ny Tompo aminy no betsaka. Mahalala tsara ireo ondriny i Jesoa ! Midika zavatra betsaka izany satria hikarakara ny rehetra momba ireo ondriny ireo Izy. Ankoatr’izay dia mitarika ny ondry Izy ary manome azy ireo fiainana mandrakizay. Tsy fiainana mandra-pahafaty na mandrapanota izany fa mandrakizay. Na inona na inona, na iza na iza, na ianao ihany, eny fa na dia ny devoly aza dia tsy misy mahasaraka ny Tompo amin’ny ondriny mihitsy. Raha tsy mino ianao fa mahavita izany ny Tompo (Loza !) dia lazainy fa lehibe noho izay rehetra heverinao ny Ray ka tsy hisy hahasaraka anao amin’ny fitiavany ao amin’i Kristy mihitsy !
Ondriny tokoa ve aho sa tsy mbola ondriny ?
NY MATEMATIKA SY ANDRIAMANITRA
Audio mp3 => L’autorité du Chretien par la foi
Ny olantsika amin’ny fomba famaritantsika an’Andriamanitra, dia tiantsika ho takarina miainga avy amin’ny fepetran’ny fiainana izay ifotorantsika Izy, isika izay zavaboary, dia toy ny ampiankinintsika amin’izany ihany koa Izy, Izy anefa Ilay Mpahary. Kanefa Andriamanitra raha namorona antsika, dia nametraka antsika ao anatin’io rafi-pamoronana io izay tsy idiran’Izy tenany mihitsy, amin’ny maha Mpahary Azy.
Nohon’ izany, ny miaraka Aminy, dia tsy misy lojika, na matematika, sns.
Fa ireny zavatra ireny dia natao ho antsika olombelona fotsiny ihany. Izany no mahatonga ny rafitrisa (arithmétique) izay ampiasaintsika ho tsy mitombona rehefa tiantsika hampiarina amin’Andriamanitra. Ity misy ohatra iray mazava : ny Ray + ny Zanaka + ny Fanahy Masina = Manome 1 ihany fa tsy 3.
Ohatra iray hafa ihany koa ao amin’ny 2 Petera 3.8 : « Nefa, ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy hohadinoinareo: ny indray andro amin’ny Tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. »
Izany no antony mahatonga ahy mieritreritra fa kitoatoa ny maminavina ny andron’ny fihavian’ny Tompo amin’ny alàlana daty. Jesosy dia nilaza tamintsika mba hizaha fotsiny ireo famantarana momban’ny vanin’andro farany, fa ny ankoatr’izay kosa dia mila antsika ho malina tsara.
Ny fikatsahana hahatakatra an’Andriamanitra amin’ny alàlan’ny fahalalan-kelintsika feno hebohebo, dia mety hanokatra ny varavaran’ny fahadisoan-kevitra maro, fa ny fanokafantsika ny fontsika amin’ny fanetre-tena ho Azy kosa, dia afaka hanokatra amintsika fanambarana maro mahafinaritra.
Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Yes suscribe me to the list »
Ny adiresy imailakao dia ampiasaina mba handefasana anao ny mana sy ny vaovao momba ny asa ataon'ny Mana isan'andro. Azonao ampiasaina foana ny rohy tsy misoratra ao amin'ny mailaka mba tsy handraisana izany intsony.
La vie de Jésus – Evangile de Jean
Telecharger Mana 2019 - 18 - 17
Raha hihaino na hi telecharger ireo mana 2019-18-17… dia tsindrio eto:
2019 - 2018...